GAALKACYO: Wasiirka Cayaaraha Puntland oo dhaliilay guddiga Cusub ee Olympicada Soomaaliya
January 13, 2013 2:59 pm GMT - Written by PP - Edited by PP
Gaalkacyo: (pp)- Wasiirka shaqada , Shaqaalaha, dhalinyarada , Cayaaraha Puntland mudane C/wali Xirsi Indha-guran ayaa dhaliilay guddiga cusub ee Olympicada Soomaaliya ee horaantii bishaan dhawaan la dhisay loogana dhawaaqay magaalada Muqdisho.
Wasiirku wuxuu tilmaamay in Puntland aan laga talgalyaynin dhismaha guddigaasi, maadaama Soomaaliya oo dhan la doonayay in guddigan ay ka tashadaan .
Wasiirka shaqada iyo Shaqaalaha Puntland
Wasiirka shaqada , Shaqaalaha, dhalinyarada , Cayaaraha Puntland mudane C/wali Xirsi Indha-guran wuxuu tilmaamay in arrintani ay wa u dhiayso hanaankii Federaalka ee Sooaaliya ay u gudubtay, loona baahnaa in Soomaalida oo dhan ay ka midaysan tahay dhisaha gudigaasi oo cod dhaaystiran oo lagu kalsoonyahay lagu hirgaliyo.
Wasiirku wuxuu sheegay in arrintani ay sameeyeen Koox afduubatay codki iyo xuquuqdii umada Soomaaliyeed ay lahayd oo qol isku soo xiray.
Wasiirka shaqada , Shaqaalaha, dhalinyarada , Cayaaraha Puntland mudane C/wali Xirsi Indha-guran wuxuu sheegay in arrintaniu ay soo dedejinayso niyad jab ballaaran oo ku yimaada dhalinyarada Soomaaliyeed, wuxuuse tilmaaay Wasiirku in arrintan uu kala xiriiri doono dawlada Federaalka ee Soomaaliya.
Guddiga la dhisay ayaa loo qaybiyey si aan waafaqsanayn sharuucda, isla markaanma ragg qol isku xiray ay is doorteen, iyagoo adeegsanaya magac Soomaaliyeed.
Arrintani waxay imaanaysaa xilli Puntland ay tirsanayso dhaliilo fara badan oo la xiriira in habka Federaalka mar walba wax lagu qaybsado islamarkaana aan laga qaybgalin.